China Fahasalamana ary tsy dia misy setroka solika solika setroka fanendasana vy fanamboarana sy orinasa | SANXIA
Telefaona: +86 13013230888
mihodina vy mihoampampana
Fahasalamana sy fihenan'ny solika setroka fanadiovana vy ...
Ny sarimihetsika fanendasana vy tsy manam-paharoa dia azo ampiasaina ho fryin ...
Kofehy vy vy mandoaka vy roa mandresy amin'ny re alemà ...
Ny lafaoro holandey mahasalama dia manana fahaizana mahandro tsara kokoa
Sady manendasa vy miaraka amina hazo tokana no ...
Fahasalamana ary tsy dia misy setroka solika setroka fanendasana vy
Famaritana:Φ260 * 46mm Φ280 * 50mm Φ300 * 50mm
lanja:Manodidina ny 1.1kg ka hatramin'ny 1.4kg amin'ny famaritana
Fomban'ny endrika vilany:Fitaovana fikirakirana, famaritana vilany, fantsom-panafody, fomba fanao azo amboarina
Ny lapoaly vita amin'ny vy madio madio dia maivana sy manify, ary azon'ny tanana iray atao. Afaka manendasa steak, elatra akoho nendasina, fampidinana hafanana haingana, sakafo matsiro matsiro.
Toetra mampiavaka sy tombony
Na dia maivana sy manify aza ny vilany, dia tsara tarehy ny endrin'ny hatevin'ny anjarany tsirairay, izay tena mety amin'ny famindrana hafanana. Rehefa mahandro sakafo dia ho hitanao fa haingana be ny fanafanana ary kely ny setroka.
Ny atin'ny vilany dia tsy misy firakotra simika, izay tena tsara ho an'ny fahasalamana. Matetika izy io no ampiasaina. Hisintona menaka tsy tapaka ny velaran'ny vilany, ary ho sarotra kokoa ny hifikitra amin'ny vilany rehefa mahandro.
Ny teknolojia tsy manam-paharoa amin'ny vy manorotoro dia raisina hanatsarana ny hamafin'ny vilany sy ny hakitroky ny vilany. Nohatsaraina ny fahafahan'ny fisorohana ny harafesina amin'ny fahandro. Raha voatazona tsotra izao amin'ny fampiasana isan'andro dia azo sorohina ny harafesina. Ity dia teknolojia tena akaiky, izay afaka misoroka olana maro amin'ny fampiasana ny fianakaviana.
Andininy momba ny fitaovana fandrahoana sakafo
Ny vatan'ny vilany dia vita amin'ny famolavolana manan-tsaina, izay afaka mamolavola ny hateviny marina ary manenjana manokana ny ambany, izay afaka manamafy ny fiakaran'ny hafanana amin'ny vatan'ny vilany, ary mahatonga ny vilany ho mateza sy henjana kokoa. Ny tahony dia hazo, misy vokany tsara fanodikodinana. Afaka afindra amin'ny tanana iray izy ary miasa tsara mandritra ny fandrahoana sakafo.
Ity lapoaly vy maivana ity dia manana endrika endrika manankarena. Araka ny ilainao dia azonao atao ny manamboatra ny fitaovana fikirakirana, ampio ny lohan-tsofina sy ny diloilo menaka. Ankoatr'izay, ny loko rindrina ivelany dia azo faritana ihany koa. Ny teknolojia miloko an'ny Sanxia dia afaka mamaly ny filanao bebe kokoa amin'ny lokon'ny vokatra. Tsy mila miahiahy momba ny antsipirian'ny fisehoan'ny vokatra ianao. Hodinihinay tsara izy ireo.
Teo aloha: Ny sarom-panendasana vy tsy manam-paharoa dia azo ampiasaina ho lapoaly
Manaraka: Vilany vy madio madio misy lanjany maivana sy fitarihana hafanana mitovy
04 Skillet tsy misy vy tsy misy hazo 304
Efatra vy Skillet
igh Fahadiovana vy
magazay Steel Stainless Skillet
nantsoina hoe Skillets Iron Cast
nucated Polar Iron Skillet
Steel tsy misy kofehy vy
Rindrina anatiny enamel ny fanendasana tokan-tena ...
Rindrina anatiny enamel an'ny vatan-kazo tokana ...
Vilany vy madio madio misy lanjany maivana sy ...
FAHALALANA bebe kokoa HANAZAVANA
Tags mafana, Vokatra mafana, Sitemap
ncoated Cast Iron Skillet, t stainless Cast Iron Skillet, Cast Iron Skillet, nantsoina hoe Skillets Iron Cast, namel Skillet, xtreme Iron Skillet,
1512, Guofu Building, 150 Jianshe South Street, Distrikan'i Qiaoxi, Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei